စမတ်ဖုန်းများဟာ အနာဂတ်မှာ အနံ့ခံ စွမ်းရည် ပိုင်ဆိုင်လာတော့မလား ? | Myanmar Mobile App
Home Trending Smartphone စမတ်ဖုန်းများဟာ အနာဂတ်မှာ အနံ့ခံ စွမ်းရည် ပိုင်ဆိုင်လာတော့မလား ?
စမတ်ဖုန်းများဟာ အနာဂတ်မှာ အနံ့ခံ စွမ်းရည် ပိုင်ဆိုင်လာတော့မလား ?
စမတ်ဖုန်းများဟာ ဖုန်းပြောဖို့ သက်သက် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အွန်လိုင်းမှာ ဈေးဝယ်ခြင်း၊ တည်နေရာများ လမ်းညွှန်ခြင်း၊ အလုပ်ကိစ္စများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ TV Remote အနေနဲ့ အသုံးပြုခြင်း၊ Scanner လို အသုံးပြုခြင်း အပါအ၀င် အလုပ်များစွာကို ပြုလုပ်ပေးလာနိုင်ကြပါပြီ။ အခုလည်း ဂျာမနီမှ Karlsruhe Institute of Technology (KIT) က စမတ်ဖုန်းများမှာ အနံ့ခံ စွမ်းရည်ကို ထည့်သွင်းပေးဖို့ ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။
အဲဒီအတွက် အနာဂတ် စမတ်ဖုန်းများဟာ ပုပ်နေတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသား၊ ငါးများကို ပြောပြပေးခြင်း၊ လူတွေ အနံ့မခံချင်လောက်အောင် ဆိုးရွားတဲ့ အနံ့အသက်များ၊ အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေတဲ့ အနံ့အသက်များကို လူတွေ ကိုယ်စား အာရုံခံ ပေးခြင်းများကို ပြုလုပ်လာနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပညာရှင်များက လူ့နှာခေါင်းလို စွမ်းရည်များပါတဲ့ Electronics Nose ကို ဖန်တီးနေပါတယ်။ တီထွင်သူ အဖွဲ့မှ Dr. Martin Sommer က သူ့ရဲ့ အီလက်ထရောနစ် နှာခေါင်းမှ Nanofibers များဟာ အနံ့များကို ခွဲခြားနိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ လူ့နှာခေါင်းမှာ အနံ့ခံ ဆဲလ်ပေါင်း ၁၀ သန်းဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ဆဲလ်များဟာ မတူညီတဲ့ အနံ့များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပြီး လူ့ရဲ့ ဦးနှောက်ကို သတင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အီလက်ထရောနစ် နှာခေါင်းဟာ စင်တီမီတာ အနည်းငယ်သာ ရှိတဲ့အတွက် ဖုန်းထဲမှာ ထည့်သွင်းလို့ အဆင်ပြေစေပါတယ်။
တီထွင်သူများက သူတို့ရဲ့ နည်းပညာပါတဲ့ စမတ်ဖုန်းများဟာ ဈေးဝယ်တဲ့ အခါမှာ လတ်ဆတ်တဲ့ အသား၊ ငါးများကို ပြောပြပေးခြင်း၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုကို သိရှိခြင်း၊ မီးလောင်မှုများကို သတိပေးခြင်းများလို အလုပ်များကို ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
စမတျဖုနျးမြားဟာ အနာဂတျမှာ အနံ့ခံ စှမျးရညျ ပိုငျဆိုငျလာတော့မလား ?
စမတျဖုနျးမြားဟာ ဖုနျးပွောဖို့ သကျသကျ မဟုတျတော့ပါဘူး။ အှနျလိုငျးမှာ ဈေးဝယျခွငျး၊ တညျနရောမြား လမျးညှနျခွငျး၊ အလုပျကိစ်စမြား ပွုလုပျခွငျး၊ TV Remote အနနေဲ့ အသုံးပွုခွငျး၊ Scanner လို အသုံးပွုခွငျး အပါအဝငျ အလုပျမြားစှာကို ပွုလုပျပေးလာနိုငျကွပါပွီ။ အခုလညျး ဂြာမနီမှ Karlsruhe Institute of Technology (KIT) က စမတျဖုနျးမြားမှာ အနံ့ခံ စှမျးရညျကို ထညျ့သှငျးပေးဖို့ ပွုလုပျနကွေပါတယျ။
အဲဒီအတှကျ အနာဂတျ စမတျဖုနျးမြားဟာ ပုပျနတေဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ၊ အသား၊ ငါးမြားကို ပွောပွပေးခွငျး၊ လူတှေ အနံ့မခံခငျြလောကျအောငျ ဆိုးရှားတဲ့ အနံ့အသကျမြား၊ အဆိပျအတောကျ ဖွဈစတေဲ့ အနံ့အသကျမြားကို လူတှေ ကိုယျစား အာရုံခံ ပေးခွငျးမြားကို ပွုလုပျလာနိုငျကွမှာ ဖွဈပါတယျ။
ပညာရှငျမြားက လူ့နှာခေါငျးလို စှမျးရညျမြားပါတဲ့ Electronics Nose ကို ဖနျတီးနပေါတယျ။ တီထှငျသူ အဖှဲ့မှ Dr. Martin Sommer က သူ့ရဲ့ အီလကျထရောနဈ နှာခေါငျးမှ Nanofibers မြားဟာ အနံ့မြားကို ခှဲခွားနိုငျတယျလို့ ပွောပါတယျ။ လူ့နှာခေါငျးမှာ အနံ့ခံ ဆဲလျပေါငျး ၁၀ သနျးဝနျးကငျြရှိပါတယျ။ အဲဒီ ဆဲလျမြားဟာ မတူညီတဲ့ အနံ့မြားကို ခှဲခွမျးစိတျဖွာနိုငျပွီး လူ့ရဲ့ ဦးနှောကျကို သတငျးပေးနိုငျပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ အီလကျထရောနဈ နှာခေါငျးဟာ စငျတီမီတာ အနညျးငယျသာ ရှိတဲ့အတှကျ ဖုနျးထဲမှာ ထညျ့သှငျးလို့ အဆငျပွစေပေါတယျ။
တီထှငျသူမြားက သူတို့ရဲ့ နညျးပညာပါတဲ့ စမတျဖုနျးမြားဟာ ဈေးဝယျတဲ့ အခါမှာ လတျဆတျတဲ့ အသား၊ ငါးမြားကို ပွောပွပေးခွငျး၊ လထေုညဈညမျးမှုကို သိရှိခွငျး၊ မီးလောငျမှုမြားကို သတိပေးခွငျးမြားလို အလုပျမြားကို ပွုလုပျနိုငျဖို့ မြှျောလငျ့ထားပါတယျ။
Previous articleiPhone9တွင်စွမ်းဆောင်ချက်ပိုကောင်းပြီး သက်တမ်းတာရှည်ခံတဲ့ဘက်ထရီပါဝင်လာမည်
Next articleiOS 11.4 Update မှာပါဝင်လာတဲ့ Feature သစ်များ